Tayada Li Polymer Battery & Wershada Battery ee dabacsan ee Lithium Ion ee Shiinaha
Goor dhow ayaan ku soo wici doonnaa!
Awoodda Caadiga ah
18650 Xidhmo Battery Lithium ah
baytariyada Lithium ee la tuuri karo
Batariga Sigaarka ee Elektarooniga ah
Battery Lithium Ion dabacsan
Heerkulka Sare ee Lithium Ion Battery
Habka Kaydinta Tamarta Qoyska
Lii Polymer Battery
Heerkulka hoose ee baytari lithium ion
Xidhmada baytariyada caafimaadka
Battery Lithium Military
Nidaamyada Kaydinta Tamarta Mobile-ka
Batari Lithium Power ah
Batteriga Lithium-ka khafiifka ah
Qaybaha ugu sareeya
KC 601015 Li Polymer Battery 60mAh 3.7V ee Heerkulka Infrared
Hel Qiimaha ugu Wanaagsan
300mah 3.8v baytari dib loo dalacsan karo, 1030108 dabacsanaan lithium ion baytari
Nakhshad Gaar ah oo Dabacsan Li Ion Battery 740mah 3.7v 500 Waqti Nolosha Wareega
220mah 3.8 V Lithium Ion baytari Polymer, 1020140 baytari lithium dabacsan
360 Mah Arc Battery 1125150 500 times Life Cycle Life 0.2c Heerka Sii Daynta Hadda
3.8 Volt Arc Battery 10mah 121126 12 bilood damaanada Qarx
1020140 220mah Battery Lithium Flexable 3.8v ee Qalabka Elektarooniga ah
Qaabka Arc 300mah baytariga Lithium, 3.8 V Lithium Ion baytariga polymer 1030108
15mah 3.7v Ultrathin dib-u dalacsiin kara Lithium Polymer baytariyada Naqshad gaar ah
042232 Batari Lithium khafiif ah 500 jeer wakhtiga wareegga nolosha 1 sano oo dammaanad ah
Dhumucdiisuna tahay 0.4mm 3.7V 24mAh 043040 Ultra Thin Battery Lithium
150mAh 3.0V 054848 0.5mm baytari lithium khafiif ah
dongguan Hoppt Shirkadda Light Technology Co.,Ltd.
dongguan Hoppt Light Technology Co., Ltd. waxa uu ku dhashay 2005 oo xarunteedu tahay Chengye Industrial Park, Guantai Road, Dongguan City, taas oo uu leeyahay Huizhou & Dongguan saldhigyada waaweyn wax soo saarka iyo Songshan dambe ee xarunta cilmi. Waa shirkad warshadeed oo siisa xalal awoodeed oo habaysan iyo adeegyo badeecadeed macaamiisha caalamiga ah.
Alaabta ugu Sarreeya
210mAh Qalabka Wearable 551430 Smart Water Cup Battery
523450 Li Polymer Battery 1000mAh batari lithium polymer dib lagu soo celin karo 3.7V
Xirmada Caafimaadka ee Korontada ee Qalabka nuugida xaakada ee ogaanshaha cilladaha Ecg Mobile
HB 3.7V 907090 1S3P 20Ah Lithium Polymer baytariga gaarka ah
1200mah Li Polymer Battery 753048 Deegaanka u Wanaagsan 1 Sano
Macmiil Waligaa Yiri
baytariyada ay bixiyaan waa tayo wanaagsan; Waan ku faraxsanahay - Daniel Mickey
Tayada baytariyadii hore loo isticmaali jiray ma fiicna, sidaas darteed waxaan u aaday inaan helo alaab-qeybiyeyaal kale. Batteriga ay shirkaddu bixisay ayaa wax ka beddelay aragtidayda ku aaddan baytariyada Shiinaha, waxaanan aad ugu qanacsanahay iskaashiga. -- John Day
Xuquuqda daabacaadda © 2020 - 2021 lipolymer-battery.com . All Rights Reserved.Mareegahaan waxaa maamula LIXIN LIU.